Madaxweyne Farmaajo oo ka digay in wax laga beddelo heshiiskii 17-ka September | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Madaxweyne Farmaajo oo ka digay in wax laga beddelo heshiiskii 17-ka September
Madaxweyne Farmaajo oo ka digay in wax laga beddelo heshiiskii 17-ka September
Farmaajo oo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabaneysa ayaa ka hadlay doorashada ka socoto dalka, wuxuuna ku baaqay in aan lagu dag dagin isbadal lagu sameeyo heshiiska 17-septembar oo ay wada saxiixdeen Madaxda Dowladda Federaalka Dowlad Goboleedyada.
“Waxaan aaminsanahay in Ra’iisulwasaaraha iyo madaxda dowlad-goboleedyadu wax badan qabteen,doorashada dadban iyadaaba muran ku dhisan,heshiiskii 17-Septemper waan saxiixay meel buuna yaallaa wuxuu ahaa mid laga fakaray waa in la iska ilaaliyaa in wax lag baddalo,” ayuu yiri Farmaajo.
”Madaxweynayaasha iyo Ra’iisulwasaaraha waa inay diiradda saaraan qabsoomidda doorasho hufan caddaalad ku dhisan qof walba oo muwaadin ahna u tartamikaro,waxa nalaka sugaayo waa doorasho.”
Antonio oo heshiis cusub la gaaray kooxda West Ham
West Ham United ayaa xaqiijisay Heshiis kordhinta xiddiga weerarka uga ciyaara ee Michail Antonio . Marka la eego muhiimada uu weerarka dhexe u leeyahay kooxda David...
Somalia oo halis ugu jirto inay weyso codka ay ku leedahay...
Farmaajo oo taariikh cusub u dhigay madaxdii soo martay xukunka Soomaaliya.
Mursal malaga yaabaa inuu berri muddo kordhin u sameeyo Farmaajo iyo...
Liverpool 3-0 Brentford: Fabinho oo gool dhaliyay xilli Reds ay ka...